Ukuqonda Imikhakha | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 27, i-2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Kuzwakala kuyinto hokey kancane lapho abantu bechaza i-Intanethi njenge-Webosphere noma ama-blogger njenge-Blogosphere. Kodwa-ke, kukhona izingqimba ezicace ngokusobala. Njengoba ukubukwa kwewebhusayithi yakho kuqhubeka nokukhula, izivakashi ziqala ukuvakashela kaningi futhi zihehe amadola amaningi.
Kunzima ukuqhekeza igobolondo lesendlalelo ngasinye, noma kunjalo. Wakha iwebhusayithi noma ibhulogi futhi kaningi ihlala ngaphandle kwezivakashi noma okuhehayo kuze kube ukumenywa leso simemo siza ngamanye amawebhusayithi, kuyaqabukela nganoma iyiphi enye indlela. Izinkampani zemidiya yizona ezihlukile. Izinkampani zabezindaba bese zivele zisatshalaliswa ngobuningi ngakho-ke zikwazile ukusebenzisa lokho kusatshalaliswa ukwakha isisekelo kuwebhu.
Ngeshwa, abezindaba bendabuko bebehamba kancane ukwamukela, noma kunjalo, ngakho-ke kuye kwadingeka bakhokhe kahle ukuze babuyise umfutho abalahlekile. Abantu ababenenhlanhla yokungena kuwebhu kusenesikhathi (abanye abanethalente noma iningi ngaphandle komkhiqizo omuhle) basazuza izinzuzo. Babengamaphayona athi isiteki sabo ezweni elibaluleke kakhulu namuhla.
Ochwepheshe bokusebenzisa izinjini zokusesha, ama-blogger amasha ahlu, kanye nezinkampani ze-e-commerce eziphumelelayo ziyaqonda ukuthi indlela yokwakha inkampani ephumelelayo ye-intanethi ukusika kancane ungqimba ngalunye uye kolandelayo. Izifundo eziningi ezifundwe 'kubhamuza' lokuqala kwakuyiziphambeko ezenziwe ngama-rockstars amaningi asemancane, yize zazingenakuphela izinqwaba zemali ezazinqwabelene phezulu ekuqaleni. Bafike lapho kuqala bashaya amashadi, kepha abakwazanga ukubagcina beze.
I-Web 2.0 ingahle ibe yinhlanganisela yobuchwepheshe nethonya kwezenhlalo, kepha kumayelana nokutshala imali kabusha nokuqhekeka ezingxenyeni zemikhakha. Ungahle ukwazi ukugqobhoza ungqimba lapha nalaphaya ngokuwukhokhela, kepha kufanele uqinise ukuthandwa kwakho okusha okutholakele bese uqhubeka nokuqhubekela kusendlalelo esilandelayo. Uma uyi-blogger entsha noma i-ecommerce giant enolwazi, ayishintshi. “I-Web Cemetery” igcwele ama-dot coms angaqaphelanga ukuthi le yi-marathon hhayi i-sprint.
Ukunakwa nemali akwabiwa ngokulinganayo. Ukunakwa kuwebhu kucishe kufane nomntwana oneminyaka engu-10 ogcwele ikhekhe ne-Mountain Dew ephathini lokuzalwa. Imali iba minyene ngokungapheli njengoba usondela enkabeni yombuthano. Ngaphambi kwewebhu, besingenakho ukufinyelela kuleyo mali, besingazi nokuthi ikuphi… kuthathe izizukulwane zethonya nokuxhumana ukukhukhula. Kuthathe ukuthola indlela efanele nabantu abafanele. Kuwebhu, kwehlukile, noma kunjalo.
I-Webosphere ilinde okulandelayo into enkulu. Ingqalasizinda yonke isendaweni ukulinda futhi uthole okulandelayo into enkulu. Izinjini zokusesha nobuchwepheshe obufana ne- Digg yibo abavelele kakhulu. -Google Wakha uhlelo lokusebenza njalo lapho ujika ukugcina izingqimba phakathi kwabo nomncintiswano wabo. Mina nawe asinazo izinsiza zokuncintisana neGoogle. Kodwa-ke, noma iyiphi inkampani ayinayo iwebhu futhi ayikwazi ukuncintisana nemikhiqizo emihle, imibono emihle nabantu abasebenza kanzima ukuletha emakethe.
Igama ngalinye kubhulogi lakho liyaqhekeka kusendlalelo esilandelayo. Ushintsho ngalunye lokuheha oluheha esinye isivakashi lusiza i-chip ungqimba. Ushintsho ngalunye lokwandisa amabhulogi akho ukutholakala ama-chips kude. Ngaso sonke isikhathi uma uthola i-trackback, iyashenxa. Njalo lapho uphawula kwenye ibhulogi, iyaphela. Ukusuka kwi-webosphere, kuya kubloglog, ukuthola abafundi, nokwenza i-A-List of blogger - uhambo lude. Kepha noma ngubani kithi angakwazi.
Enye into emnandi ngephaseji ukuthi amandla adonsela phansi ayakhula njengoba usondela enkabeni. Ngelinye ilanga ibhulogi yakho ikalwe i-500,000 futhi ezinyangeni eziyisithupha kamuva isiku-5,000. Iningi labantu lizophelelwa amandla, liphelelwe yimibono, liphelelwe yimali, noma limane liphele ingoma yalo kumashadi.
Ufudu nonogwaja… izimfudu zinakho! Gcina ukusika kude!
I-dnScoop ithi dnScoop.com ayifanele neze
I-Scared Stiff: Ukukhwabanisa kwe-Identity kanye ne-Intanethi
Feb 28, 2007 ngo-1: 19 AM
Mhlawumbe ngokuzisola kancane ngibona i-SEO / ukumaketha / amabhulogi webhizinisi aku-inthanethi (iqembu elejwayelekile) elibusa i-blogosphere. Ngenkathi amabhulogi wokuphromotha enza ingxenyana encane kuphela yenani lokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi aboniswa ngokungenakulinganiswa ekusesheni komphakathi njengosesho lwebhulogi, okumnandi ne-technorati.
Ama-SEO ngokwemvelo alawula izinjini zokusesha, yingakho abizwa ngokuthi ama-search engine optimizers. Angisho ukuthi lokhu kuyinto embi, kuhle nje ukuthi ube nokulinganisela.
Feb 28, 2007 ngo-4: 38 AM
Ucezu olukhuthazayo kakhulu. Ngiyayithanda indlela obone ngayo izingqimba nomsebenzi esiwenzayo owengeza "ekuchipheni" kwalezi zingqimba.
Feb 28, 2007 ngo-2: 32 PM
Feb 28, 2007 ngo-3: 30 PM